प्रवास बोर्ड तपाईं मसीही छन् भने निर्धारण  | Apg29
प्रवास बोर्ड तपाईं मसीही छन् भने निर्धारण 
यो वास्तवमा मात्र कसैलाई मसीही छ वा छैन भने निर्धारण गर्न समस्या आवश्यक जब माइग्रेसन बोर्ड गरेको 12 प्रश्नहरूको सबैभन्दा जवाफ पूर्ण असम्भव र पनि पूर्ण अप्रभावी छन्।
शरण खोज्नेहरूको तिनीहरूले माइग्रेसन बोर्ड प्रयोग आफ्नो रूपान्तरण साँचो हो भने पत्ता लगाउन क्विजहरू सहित आफ्नो निवास आधारको रूपमा ख्रीष्टियन रूपान्तरित छ भन्न जब। यहाँ म 12 यस्ता प्रश्नहरू सूची।
यो वास्तवमा मात्र कसैलाई मसीही छ वा छैन भने निर्धारण गर्न समस्या आवश्यक जब प्रश्न सबैभन्दा जवाफ पूर्ण असम्भव र पनि पूर्ण अप्रभावी छन्।
म 35 वर्ष को लागि सुरक्षित गरिएको छ र प्रश्न को सबै भन्दा जवाफ सक्दैन। तर मुख्य समस्या म जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, छैन!
प्रवास बोर्ड ख्रीष्टियन मुद्दाहरू
12 यहाँ प्रश्न unedan को लिइएका हुन् मिनेट को अध्यागमन सेवा तिनीहरू साँच्चै मसीहीहरू हुन् कि आकलन गर्न रूपान्तरण सोध्छन् के * को। (* म मेरो लेखमा तल थप व्याख्या जो शब्द "रूपान्तरण", रुचि छैन।)
दस आज्ञा सूची।
तपाईं हामीलाई मत्ती 10:34 मा लेखिएको छ के एक सानो बताउन सक्नुहुन्छ?
कति भागहरु नयाँ नियममा समावेश?
के बाइबल प्रभुको प्रार्थना को भाग मा? यसलाई कुनै पनि नम्बर छ?
प्रोटेस्टेन्ट र अर्थोडक्स चर्च कस्तो भिन्नता छ?
तपाईं sacraments गर्न सक्नुहुन्छ?
चर्च वर्ष उत्सव वर्णन।
ख्रीष्टियन कस्तो निषेध गरिएको छ?
इस्टर आइतबार Maundy बिहीबार देखि के भयो, व्याख्या गर्नुहोस्।
ख्रीष्टियन हिंसात्मक इतिहास तपाईं कसरी सम्बन्धित छन्?
के अन्य चर्च, पेन्टेकोस्टल र स्वीडिश चर्च एउटा मिशन चर्चको distinguishes?
नयाँ नियममा महिला धेरै शत्रुतापूर्ण छ भनेर तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ?
विवादहरू स्रोत, म "फेला हूँ म एक मसीही अब? कहाँ तपाईं पनि परीक्षण लाग्न सक्छ।" म 35 वर्ष को लागि सुरक्षित गर्नुभएको गरिएको, तर म परीक्षण खडा गर्न सकिँदैन, त्यसैले त्यसैले यसको बारेमा म पाऱ्यो छैन छु।
तपाईं मसीही वा छैनन् भने तिनीहरूलाई जवाफ निर्धारण गर्दैन किनभने परीक्षण मा प्रश्न गलत प्रश्न छ। सत्य यो मात्र भनेर मसीही वा छैन कि निर्धारण एकल मुद्दा लिन्छ कि छ:
- येशूले प्रभु हुनुहुन्छ?
तपाईं यो प्रश्नको हो जवाफ र विश्वास भने परमेश्वरले येशूलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो भनेर सुरक्षित छ।
तपाईं मसीही हुनुहुन्छ वा छैन कि के निर्धारण, तपाईं आफ्नो जीवन प्रभु येशू प्राप्त गरेको छ। तपाईं छैन भने, त्यसपछि तपाईं मसीही, वा सुरक्षित, रूपमा बाइबल पनि भन्छन् छन्। तपाईं ज्ञान धेरै छ किनभने तपाईं सुरक्षित गरिने वा मसीही, तर तपाईं प्रभु येशू प्राप्त गर्नुभएको छ भने।
तिनीहरूले उहाँलाई विश्वास गरेर येशूको प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रवास बोर्ड परीक्षा मा एक एकल प्रश्न बनाउँछ। प्रश्नहरूको अधिकांश माथि वरिपरि तपाईं जवाफ वा सक्दैन भने फरक छैन भनेर मुद्दा छ।
म शब्द रूपान्तरण रुचि छैन
यस सन्दर्भमा, एक "रूपान्तरण" र ख्रीष्टियन रूपान्तरित गर्ने मतलब मान्छे बताइएको छ। म यसलाई भ्रामक छ लाग्छ किनभने शब्द रूपान्तरण गर्न रुचि छैन।
यो यस्तो ख्रीष्टियन कुनै पनि धर्म, गर्न रूपान्तरण गर्न बारेमा छैन, तर यो तपाईं प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवित व्यक्ति प्राप्त गर्नुभएको छ भने बारेमा छ!
कुनै धर्म - तपाईं प्राप्त एक प्रत्यक्ष व्यक्ति हो। धर्म बचत गर्न सक्षम भएको कहिल्यै छ, तर येशू ख्रीष्टको व्यक्ति redeems र साँच्चै र ठीक बचाउँछ!
राम्रो मुद्दाहरू लेगी गर्न गरेको
मलाई लाग्छ Micael Grenholm इन्टरनेटमा परीक्षण प्रकाशन को initiators मध्ये एक छ र यसरी सोधे प्रश्नहरू कस्ता प्रकट गर्छ। म व्यक्तिगत विचार यो धेरै राम्रो तरिकाले सोधे पनि निरर्थक प्रश्न प्रकट गर्न यो आग्रह गर्न आवश्यक मात्र एक प्रश्न जब उसलाई द्वारा गरिन्छ:
Vecka 21, söndag 26 maj 2019 kl. 11:15